192.168.8.200 - Admin Login - Adeegsade Magac iyo Furaha ereyga
Cinwaanka IP-ga 192.168.8.200 ayaa loogu talagalay helitaanka shaashadda maamulka router. IP-kan, iyo sidoo kale kuwa kale sida 192.168.1.11, 192.168.8.1, iyo 192.168.168.1, waa router IP-yada adduunka laga aqoonsan yahay. Suugaanta, waxaa sidoo kale loo yaqaan "Default Gateway IP."
192.168.8.200 Soo gal
Cinwaanka IP-gu wuxuu u dhexeeyaa 192.168.0.0 ilaa 192.168.255.255
Cinwaan IP ah sida 192.168.0.0 iyo sidoo kale 192.168.255.255 waa qayb ka mid ah shabakadaha maxalliga ah ee lagu sharaxay Shabakadda Maxalliga ah ee Deegaanka. Marka qalabku si wada jir ah ula xiriiro isagoon ka dhex marin internetka shabakadan shaqsiyadeed ayaa la abuuray. Ku 192.168.8.200 Cinwaanadu waxay ogaadaan meel ku midaysan sanduuqa internetka, kombiyuutar ku yaal LAN, ama qalab kale oo ka duwan shabakadda.
Waa login IP default kaas oo loogu talagalay wireless ama modules router. Barta cinwaanka adigoo furaya 192.168.8.200 biraawsarka waxaad ka heli doontaa marin u helka xadka maamulka router-ka. Badanaa 192.168.8.200 waxaa sameeya kuwa sameeya sida Asoka. Kaliya maahan heerka shaqsiyeed ee IP ee router-ka. Waxaa jira xamuul badan oo IP ah tusaale ahaan 192.168.2.1, 192.168.0.1, or 192.168.1.1 kuwaas oo loo adeegsaday marin u helida koontaroolka xariijinta Power Line. IP-ga caadiga ah waxaa xitaa loo yaqaan Default IP Gateway.
In dib loo dhigo PW-ga 192.168.8.200
Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad dib u dejiso modemka. Tan waxaa si fudud loogu samayn karaa adoo riixaya furaha dib u dajinta gadaasha dambe ama salka hoose ee modemka. Haddii aad haysatay furaha yar 20 ilbidhiqsi, (waxaad u baahan tahay inaad tan ku samayso adigoo isticmaalaya burushka ilig caday), ka dib modemka ayaa dib loogu soo celinayaa goobtii warshadda.
Si fudud waa inaad maskaxda ku haysaa marka uu modem-kaaga yahay dib u bilow, waxaad waayi doontaa khadkaaga internetka. Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad qaadatid caawimaadda qof khibrad u leh habka.
Haddii aad heshay macluumaad aad u yar, waxaan kugula talineynaa inaad ka caawiso qof leh khibrad noocaas ah.
The 192.168.8.200 Cinwaanka IP-ga waxaa bixiya Consortium GARR, waxaa iska leh CDIR 192.167.0.0/16. Si fudud u qor 192.168.8.200 ama guji badhanka samee traceroute.
Sida ugu dhakhsaha badan cinwaanka 192.168.8.200 wuxuu aqoonsan yahay router, bogga maamulka waxaa laga heli karaa biraawsarka internetka.
Ku qor https://192.168.8.200 furitaanka isku xirnaanta qaabeynta, barta cinwaanka biraawsarka. Xaaladaha kale, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho magaca loo yaqaan 'kaas oo ku ogaanaya qalabka shabakadda.
Username & Password ee 192.168.8.200